Seychelles yekuGamuchira Kudzoka Kwezvikepe zveChikepe munaNovember 2021
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles yekuGamuchira Kudzoka Kwezvikepe zveChikepe munaNovember 2021
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kurwisa • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Kuvhura mwaka we2021-2022 cruise mwaka waNovember 14, 2021, ichave MS Island Sky, yekutanga cruise ngarava kuenda kuSeychelles kubvira pakavharwa nzvimbo yekuenda kunofambisa ngarava munaKurume 2020. Sezvinoenderana nesarudzo yakatorwa nevakuru venyika. muna Kurume 2021 zvine chekuita nekukura kwemidziyo uye kudzikisira vanokwanisa kutakura, Seychelles ichave ichingogamuchira ngarava diki dzine vanokwira mazana matatu.
Island Sky yaive yakajairwa kuona muSychelles mvura pamberi pehosha.
Zviteshi zvekufona zvichaitwa pazvina zvezvitsuwa zvekunze zveSeychelles - Aldabra, Assomption, Farquhar, neCosmoledo.
Hurumende iri kushanda pamwe chete nevakuru vehutano, dhipatimendi rezvekushanya, chiteshi chechiteshi, uye indasitiri yekushanya, uye yagadzirisa nzira nyowani dzekubvumidza kudzoka kwakachengeteka kwekufamba kwechikepe.
Island Sky, inofambiswa neLondon-yakavakirwa Noble Caledonia, ingarava diki diki yekufambisa ine vanhu vanokwana 118 vanofamba; kugara uchiona mumvura yeSychelles chirwere ichi chisati chavapo, achange achishevedza ina ezvitsuwa zvekunze zveSeychelles, zvinoti Aldabra, Assomption, Farquhar neCosmoledo. MS Island Sky ichateverwa nedzimwewo diki ngarava dzengarava mumwaka wese.
Secretary-Secretary weCivil Aviation, Ports & Marine, VaAlan Renaud, vataura kuti mugore ra2020, vachishanda vakabatana nevehutano, bazi rezvekushanya, chiteshi chechiteshi, pamwe neindasitiri yezvekushanya, iro department, vakaita maitiro matsva bvumira kudzoka kwakachengeteka kwechikepe chengarava kushanyira Seychelles.
PS Renaud yakati kuti ifambise kutangazve kwekufambisa ngarava, Dhipatimendi reCivil Aviation, Ports & Marine yakagadzira COVID-19 Kambani uye Cruise Ship Checklist yevanofamba nezvikepe, uye yakafanana COVID-19 Port Management Chirongwa chevakuru kuunzwa mwedzi unouya. Iwo ekuwedzera magwaro akavakirwa pane gwara rakaburitswa pamwechete neEuropean Maritime Safety Agency (EMSA) uye European Center for Disease Prevention Control (ECDC) uye yakatsigirwa neInternational Maritime Organisation (IMO), uye inotora nzira-based nzira, ichiratidza matanho anotorwa mungarava uye kumahombekombe kuona mashandiro akachengeteka.
"Zvinyorwa zvinoratidzira mabasa akanangana nemasangano emuno uye ngarava dzehukama zvine chekuita nenyaya dzeCOVID-19, kuzivikanwa kwezviwanikwa zvakakosha nevashandi, mutyairi uye gadziriro yekumira pazviteshi zvese zvekufona, zvinoitika kana paitika COVID-19 kuputika. "
Dhipatimendi iri kuburitsa zvakare maritime vhezheni yazvino yekupa mvumo yekufamba, iyo inochinjirwa kune ngarava dzezvikepe uye yachts, ichishanda panguva imwe chete senzira yekuchengetedza hutano pamwe neyakagadziridzwa yemuganho yekudzora system yemidziyo iri kuuya. Iyo maritime edition ichabatanidzwa nehurongwa hwengarava uye kuita kuti ive isina musono, isina mapepa, isingabatike maitiro ekutanga uye kuburutsa vashanyi nengarava pachavo.